Kooxi hii iskudayay in ee Afganbiyaan Dowlada Turkeyga, qaarkood sirar ay dhiibeen ayaa lagu xeray Xildhibaanno!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Kooxi hii iskudayay in ee Afganbiyaan Dowlada Turkeyga, qaarkood sirar ay dhiibeen ayaa lagu xeray Xildhibaanno!!
Kooxi hii iskudayay in ee Afganbiyaan Dowlada Turkeyga, qaarkood sirar ay dhiibeen ayaa lagu xeray Xildhibaanno!!
Nov 04, 2016WARAR
Qaraxa bambaano ayaa ka dhacay dibedda saldhig boolis oo ku yaalla magaalada Diyarbakir ee koonfur bari Turkiga, saacado ka dib markii ay dowladda xirtay madaxda xisbiga saddexaad ee ugu weyn baarlamaanka dalkaasi.
Xisbiga HDP ayaa ah mid u janjeera Kurdiyiinta.
Wasiirka cadaallada ee Turkiga, Bekir Bozdag, ayaa sheegay in madaxda HDP Selahattin Demirtas iyo Figen Yüksekdag, la xiray ka dib markii ay diideen in su’aalo laga weydiiyo eedeyn ah in ay xiriir la leeyihiin ururka dalkaasi laga mamnuucay ee PKK.
Xildhibaannadaasi ayaa beeniyay eedaha loo jeediyay.
Xasaannada baarlamaani ee ay lahaayeen ayaa laga xayuubiyay bishii May ee sanadkan.
Madaxa siyaasadda dibedda ee Midowga Yurub, Federica Mogherini, ayaa sheegtay in ay ka walaacsan tahay xariga xildhibaannadaasi iyo weliba 10 mudane oo horay loogu xiray Turkiga.
Previous PostDAAWO MUUQAAL: Gaashaanle Is diray iyo Muuqaal Wariye C.maalik Coldoon uga Duubay Muqdisho oo Dadka soo Jiitay! Next PostDowladda Burundi oo ku Hanjabtay in Ciidankeeda ay kala baxeyso Dalka Soomaaliya waa hadii..........!